Daawo Video: Gabadh Soomaaliyeed oo Jecel Ninka Naagaha Badan Qaba, Kana Warbixisay Ninkii hore ee ay Guursatay - Hablaha Media Network
Daawo Video: Gabadh Soomaaliyeed oo Jecel Ninka Naagaha Badan Qaba, Kana Warbixisay Ninkii hore ee ay Guursatay
HMN:- Xaliima Muxumed oo ku nool dalka Britain ayaa 10 sano ka hor u safartay dalkeedii hooyo ee Soomaaliya si ay u guursato nin saddex xaas oo hore qaba.
Reerkaas ayaa ka dumay oo way kala tageen ninkeedii hore, hadda waxay dib ugu laabatay Britain halkaas oo ay kaga faalooto guurka xaasaska badan. ”Wuxuu qabay seddax xaas aniga ayaan noqday tan afaraad, waana kala tagnay, balse hadda waxaan guursanayaa nin xaasas leh oo keli ah,ma doonayo nin kale anigu” ayey tiri gabadhaan wareysi bixineysay.
” Waxa ugu adag oo aad kala kulmeyso ninka naagaha badan qabo waa sugitaanka tookadaada, sababtoo ah hal habeen adiguu kula joogayaa, habeen kale halkaas, habeen kale halkaas, xisaab la’aan isagama kaa imaanayo!”
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA GABADHA IYO WARAYSIGA
” Mid kamid ah xaasaskiisa ayaan saaxiibo aheyn, waxay igu dhaafi jirtay carruurteeda, anigana markaan fasax aadayo waan uga tagi jiray” Haddaba halkaan hoose ka daawo muuqaalka gabadhaas iyo ereyada ay ku hadleyso oo qoraal ah: